"Ciidamada shisheeye waxay u horseedi karaan dhibaatooyin iyo nabadgelyo-xumo dadkeenna iyo gobolkeenna," ayuu Rouhani ka sheegay telefishanka dowladda oo hadalkiisa si toos ah looga baahinayay. Hoggaamiyaha Iiraan ayaa sheegay inuu qorsheynayo inuu u soo bandhigo Qaramada Midoobay qorshe iskaashi gobolka ah oo ah mid nabadeed.
Maalintii Sabtida ee shalay, ayaa, Afhayeenka Aqalka Congreska Maraykanka Nancy Pelosi ay dhalleeceysay qorshaha Madaxweyne Donald Trump ee ciidamo militri oo Mareaykaka ah oo dheeri ah iyo qalabka difaaca hawada loogu diro dalka Sacuudi Carabaiya iyo Imaaraadka, iyadoo sheegeysa inay tahay isku daygii ugu dambeeyay ee uu maamulka kga wareeganayo congresska.
Raiisel Wasaaraha Australia Scott Morrison, oo booqasho rasmi ah ku tagey Aqalka Cad Jimcihii, ayaa sheegay in dalkiisa aan loo jiheyn doonin isku dhac militari oo ka dhex dhaca maraykanka iyo Iran. Morrison ayaa sheegay in balanqaadka Australia ee khaliijka uu ku xaddidan yahay xorriyadda marinka badda ee Hormuz